ICofttek Holding Limited eyafunyanwa ngo-2008, lishishini eliphezulu lokuxuba amayeza lokudibanisa imveliso, iR & D kunye nentengiso. Ifumaneka eLuohe Chemical Industry Park, ezinikele kuphando kunye nophuhliso lweshishini eliphambili lezamayeza, ukubonelela ngeemveliso ezintsha kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kumzi mveliso wamayeza.
ICofttek ineqela lolawulo elinamava kunye neqela le-R & D lodidi lokuqala, kubandakanya uninzi lweengcali ezibalaseleyo kwicandelo lophuhliso lwenkqubo yokuxuba amayeza kunye nophando lomgangatho wamayeza. Iyaziwa kwaye inokhuphiswano olubalulekileyo kwezi nkalo zamachiza ekhemisi, itekhnoloji yokwenziwa, ukuphuculwa kweziyobisi, i-bioengineering, njl njl. kunye ne China.
Ukugxininisa kumgaqo "woBulunga besiXeko, uMthengi wokuqala, iNkonzo yokunyaniseka, ukuXhamla ngokuBambisana", i-cofttek Holding Limited. ibonelela abathengi ngeemveliso ezonelisayo ngovavanyo olugqibeleleyo kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu.
ubuchwephesha obuphezulu beshishini lokudibanisa imveliso, iR & D kunye nentengiso.
Sinelabhoratri ephambili kunye nezixhobo, iqela eliphezulu le-R & D kunye nabasebenzi bolawulo.